Dowladaha Spain iyo Israel oo ka wada hadlay Arrimaha Somalia – idalenews.com
Dowladaha Spain iyo Israel oo ka wada hadlay Arrimaha Somalia
Wasiirka Arrimaha Dibadda Dalka, Spain Jose Manuel Garcia-Margallo iyo Madaxweynaha Israel, Shimon Perea, ayaa kulan ka yeeshay Dalalka Syria, Somalia, Falastiin iyo Kooxaha Argagixisadda.
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Spain, ayaa sheegay in Dowladiisu ka Feerjigan tahay Falalka Argagixisadda, wuxuuna Xusay inay Ciiddamadda Ammaanka Spain gacanta ku dhigeen labo Argagixiso oo u kala dhashay Dalalka Algeria iyo Moroko, kuwaasoo qorsheynaayay inay Falal Argagixiso ka geystaan Dalkaas.
‘’Aad baan uga taxadar qabnaa Falalka Argagixisadda. Weerarkii ugu horeeyay Argagixisadda waxa uu dalka Spain ka dhacay sanadkii 1965, waxaana ku xigay qaraxyadii Bam booyinka ee Magaaladda Madrid sanadkii 2004-tii oo ay ku geeriyoodeen 193-qof oo Spanish ah’’ayuu yiri Wasiirka Arrimaha Dibadda Spain, oo intaa ku daray inay Dowladiisu ka go’an tahay inay la dagaalamaan Kooxaha Argagixisadda ee ka dhaqdhaqaaqa Dalalka Somalia, Afganistan, Lubnaan iyo Mali.
Wasiirku waxa uu intaa ku daray in Kooxaha Argagixisadda ay baqdin weyn ku yihiin Dalalka Yurub, gaar ahaan Dalka Spain.
Dhinaca kale, Madaxweynaha Israel, Shimon Perea, ayaa soo dhaweeyay talaabadda ay Dowladda Spain ku baacsaneyso Kooxaha Argagixisadda, wuxuuna Xusay in Labadii qof ee Argagixisadda ee lagu qabtay Spain ay Khatar galin lahaayeen nolosha dad badan oo rayid ah oo waxba galabsan.
Shimon Perea, wuxuu kaloo intaa ku daray in loo baahan yahay in Dowladdaha Caalamka iska kaashadaan sidii loola dagaalami lahaa Kooxaha Argagixisadda, wuxuuna walaac ka muujiyay Dagaalyahaanada Al-qacida ee ka dagaalameysa Dalka Syria.
Xigasho:- The Jerusalem Post.
DAAWO SAWIRO Muujinaaya Maamulka Puntland oo gacanta ku dhigay Doonyo Iran laga leeyahay oo si sharci darro ah uga kaluumeysanayey biyaha badda Boosaaso ee Puntland